प्रधानमन्त्रीलाई जिग्रीको पत्र: हामी रंगशाला बनाउछौँ भन्दा सरकारलाई निर्णय गर्न कुन कुराले रोकिरहेको छ ? |
प्रधानमन्त्रीलाई जिग्रीको पत्र: हामी रंगशाला बनाउछौँ भन्दा सरकारलाई निर्णय गर्न कुन कुराले रोकिरहेको छ ?
२०७५, १ जेष्ठ मंगलवार १०:१६ May 15, 2018 ताजा खबरFeatured, क्रिकेट
काठमाडौं : नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली जिम्बाबेबाट एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाएर फर्किएको केही महिना बित्यो। टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा क्रिकेटप्रेमीको भीड लागेको थियो। स्वागतका लागि खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि विमानस्थल पुगेका थिए।
क्रिकेटप्रेमीले त्यहाँ खेलाडीलाई स्वागत मात्र गरेनन्, नेपाली क्रिकेटका अघि बढाउन गर्नु पर्ने आवश्यक कामका लागि सरकारलाई घचघच्याए। कतिपय विषयमा उनीहरूले नारा नै लगाए। तीमध्ये एउटा नारा थियो- टुँडिखेलमा खेलेर वर्ल्डकप खेल्न सकिन्न…।
धेरै दुःख गरेर हाम्रा खेलाडीहरुले नेपाललाई एकदिवसीय मान्यता दिलाएका छन्। तर बिडम्वना तिनै महान खेलाडीहरुलाई खेल्नको लागी हामीसँग एउटा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम पनि छैन।